Ethiopia:20 qof oo lagu Dilay xabsiga Amaanka Sare ee Qilinto – Xeernews24
Ethiopia:20 qof oo lagu Dilay xabsiga Amaanka Sare ee Qilinto
4. September 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
xabsi ku yaala dalka Ethiopia halkaas oo siyaasiyiinta-heerka sare lagu xareeyo ayaa dab la qabadsiiyay iyo rasaas goor dambe laga maqlayay,goobta sida laga soo xigtay warbaahinta iyo dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka dalkaasi oo dibad baxyada rabshadaha wata ruxay.
Xabsigan, oo lagu magacaabo Qilinti, oo ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa inta badan loo isticmaalaa ama lagu haya hoggaamiyayaasha kooxda qowmiyada, Oromada iyo kuwo kale.
Xubno ka tirsan bulshada Oromada ayaa horkacaya mudaharaadyo ka dhan ah xukuumadda tan iyo November, iyagoo dalbanayaan xorriyaadka siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
wargeys gaar loo leeyahay,oo lagu magacaabo Fortune ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 20 khasaaraha, laakiin ma uusan sheegin in ay yihiin dhimasho ama dhaawac.
Wargeyska ayaa sheegay in saddex saraakiisha dab-demiska loo qaaday isbitaal dhibaatooyin la xiriira neefsashada.
Idaacadda dowladda la jaalka ah ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay, iyo lix dhaawac ah. balse kooxda dhaqdhaqaaqa mucaaradka ayaa ka dhigay tirada dhintay iney u dhexeeyaan 20 iyo in ka badan 30, iyagoo xiganaya xubnaha qoyska ee maxaabiista.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/Xabsiga-Qalinto.jpg 232 450 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-04 20:17:292016-09-04 20:17:29Ethiopia:20 qof oo lagu Dilay xabsiga Amaanka Sare ee Qilinto
Muusa Biixi Muxuu uga Gubtay Hadalkii Cali Aarreeye iyo Shirkii Qaaxo? Wax la yidhi Abti meel xun laga raac Reer xariiradoow warka war kale uga No...